संजयको जीवनी चम्कियो, फिल्म फ्लप ! | रंग खबर
संजयको जीवनी चम्कियो, फिल्म फ्लप !
रंगखबर, काठमाडौँ – बलिउड अभिनेता संजय दत्तको जीवनीमा आधारित फिल्म ‘सन्जु’ अहिले पाँचौ हप्तामा प्रदर्शनरत छ । र, यसले बलिउड बक्स अफिसमा थुप्रै रेकर्ड राख्दै उत्साहजनक व्यापार गर्यो । तर, ‘सन्जु’ रिलिजको चार हप्ता पछि प्रदर्शनमा आएको संजय स्टारर ‘साहेब बिवि और ग्याङ्गस्टेर ३’ले नाजुक व्यापार गरेको छ ।
सन् २०११ मा रिलिज भएको ‘साहेब बिवि और ग्याङ्गस्टेर’को तेस्रो इन्स्टलमेन्टले बक्स अफिसमा राम्रै व्यापार गर्ने अड्कल काटिएको थियो । तर, बक्स अफिसमा संजय जीवनी चम्किदा उनको फिल्म फ्लप हुन् पुगेको छ । तीन दिनको व्यापारले नै फिल्मको लाइफटाइम कलेक्सन १५ करोड पनि नपुग्ने संकेत देखाईसकको छ । जहाँ फिल्म बजेट ३० करोड छ ।
फिल्मले पहिलो तीन दिनमा ४ करोड ४ लाख मात्र कमाउन सकेको छ । जुन कलेक्सन पहिलो दिन नै हुने ट्रेड एनालिस्टहरुको अनुमान थियो । ट्रेडको अनुमानलाई फेल खुवाउदै फिल्मले पहिलो दिन १.२५ करोड, दोस्रो दिन १.५० करोड र तेस्रो दिन १.६५ करोड मात्र बटुल्न सक्यो ।
तिग्मंशु धुलिया निर्देशित फिल्मलाई समिक्षकले पनि झुर भनेका छन् । फिल्ममा संजयका अलावा जिम्मी शेरगिल, माहि गिल, चित्रन्गदा सिंह र सोहा अलि खानको अभिनय छ ।
‘गङनम स्टाइल’ गायक नेपाल आउँदै
रणवीर-दीपाकाको विवाहमा बलिउडका ३ सेलिब्रेटी मात्र
स्पाइडर म्यानका परिकल्पनाकार अमेरिकी लेखक स्ट्यान लीको निधन
रंगखबर, काठमाडौँ- रेकर्ड ब्रेकर गीत ‘गङनम स्टाइल’का गायक साइ ,पार्क जे साङ नेपाल आउने भएका छन्..
शिल्पा पोखरेलको भयो ‘च्यानाकुटी झ्याई’ – भिडियो हेर्नुस
रंगखबर, काठमाडौँ- फिल्म भिलेनको पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘च्यानाकुटी झ्याई ‘ बोल रहेको उक्त गीतमा..
निरुता सिंहले किन छोडिन मुम्बई
रंगखबर, काठमाडौँ- कुशल अभिनेत्री निरुता सिंह अहिले मुम्बईमा आफ्नो प्रोडक्सन हाउस चलाएर उतै बस्दै आएकी..
रंगखबर, काठमाडौँ- करिब ६ बर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई रणवीर र दिपिकाले आज नँया नाम दिदैछन..
‘जात्रै जात्रा’को अष्ट्रेलिया राइट्स यति महङ्गो रकममा बिक्री
रंगखबर, काठमाडौँ- विपिन कार्की र बर्षा राउतको मुख्य भूमिका रहने फिल्म जात्रै जात्राको अहिले धमाधम..
अन्तर्वार्ता मै खुकुरी चाहियो भन्दै जङ्गीए आकाश, आष्माको उड्यो होस्- भिडियो हेर्नुस
'सम्हालिन्छ कहिले मन'मा पूजाले लिईन यति धेरै पारिश्रमिक
आकाशले छोडेको २४ घण्टा नबित्दै 'बिर बिक्रम २'मा भयो पलको इन्ट्री
'जात्रै जात्रा'का मुख्य कलाकारले एकै चोटी किन हाम फाले १५ तल्लाबाट ? - भिडियो हेर्नुस
बारम्बार ब्रेकअप हुनुमा पारमिताको दोषकि प्रेमीहरुको ?